Welcome to Aayaha Nolosha » MICNAHA IYO QIIMAHA BISHA RAMADAAN (QEYBTA 6:AAD).
MICNAHA IYO QIIMAHA BISHA RAMADAAN (QEYBTA 6:AAD).
May 11, 2019 - Waxaa Qorey : Bile Mohamed -
Waana arin tusinaysa Soonku inuu yahay, cibaado aad u saraysa ahna Sir ka dhaxaysa Adoonak iyo Rabbigiis (swt) oo qof kale uusan ogaana karin, qiimqayna karin, abaal keedana bixin karin.
Wuxuu yiri Imam la oran jiray ibnil Jowsi; bilaha Sanadku waa 12, sida ay wiilashii Nabi Yacquuba u ahaayeen 12, bisha ramadaad waa bisha uu Rabbi u jecel yahay bilaha, sida uu Yuusuf u ahaa wiilka uu Yacquub ugu jeclaa wiilashiisa.
Rabbi 11 wiil ee kale wuxuu ugu danbi dhaafay fadliga Yuusuf, sidoo kale dadka mu´miniinta ah danbiyada ka dhaca 11 bilood wuxuu Rabbi u dhaafaa bisha Ramadaan.
Bisha Ramadaan waa bil dadka Muslimiinta ah u leh qiimo aad ubalaaran, oo uu Rabbi ugu tala galay inay kasbadaan Ajar iyo xasanaad aad ufara badan. Iyagoo maalintii soomaya, habeenkiina tukanaya, ducaysanaya, Qur’aankana akhrinaya.
Waxayna u dhawaadaan xaalada Malaaigta oo ay shaqadoodu tahay kaliya inay Rabbi caabudaan, iyagoon ku mashquulaan Guur, Ganacsi, Shaqo raadin, ilmo korin iwm. Qofka Muslimka ahina bishan barakaysan tilmamahaas badankooda ayuu layimaadaa isagoo kanasta dhibkii shaytaankii fari jiray.
4 xumaanta, sharta, wahsiga, bakhiilimada iwm, wuxuuna aad ugu mashquulaa inuu Rabbi u dhawaado, danbi dhaafna weydiist, kana baryo inuu naarta ka xoreeyo.
Ujeedooyinka Soonkana waxaa kamid ah inay qofka…..La soco qeybaha kale.